Murashaxoow haddii aad guuleysato maxaa ku horyaal? - BANAADIRSOM
Home WARARKA MAANTA Murashaxoow haddii aad guuleysato maxaa ku horyaal?
Muqdisho (Banaadirsom) –Toddobaad ayaa ka harsan xiliga doorashada madaxtinimada Somalia, oo la filayo in ay ka dhacdo 15-ka May teendhada Afisyooni ee xeyn-daabka xerada ATMIS. Ku dhawaad 50 Musharax iyo ka badan ayaa la maleyn karaa inay u taagnaan karaan iney ka qeyb galaan tartankaasi hoggaanka Madaxtinimada dalka oo aysan ku jirin wax dumar ah.
Previous articleXog: Dollar been abuur ah oo lasoo geliyey Muqdisho si loogu iibsado xildhibaanada
Next articleBoqorka Sacuudi Carabiya oo isbitaal la dhigay, kadib…